I-36% yabantu baseSpain abazifundanga | Uncwadi lwangoku
Ngamanye amaxesha siyithatha njengesihloko ngaphandle kokungaguquguquki, abanye njengeyona nyani, kodwa okusalayo ekugqibeleni ngamanani, kwaye xa bebhekisa kufundo kwilizwe lethu iziphumo azinomdla kakhulu (ngakumbi ukuba siyakuthelekisa namanye amazwe afana neNorway okanye iSweden, apho ukufunda kufana nokwenza ikofu rhoqo kusasa).
Ewe I-36% yabantu baseSpain abayifundi ngokophando lwamva nje liZiko loPhando lwezeNtlalontle (i-CIS).
Ngokwe-barometer epapashwe kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo yi-CIS, I-36.1% yabantu baseSpain bathi zange bafunde (i-18,3%) okanye phantse zange (17.8%), ngelixa i-28% isithi bayayenza yonke imihla. Iipesenti ezishiyiweyo zahlulwe zaba ngabo funda kube kanye okanye kabini ngeveki (14.6%), kanye ngenyanga (12.8%) kwaye kanye ngekota (7.8%).
Ngokumalunga nenani leencwadi esizifundileyo kangangexesha elithile, I-40.7% yabo baphando ibango ukuba bafunde iincwadi ezi-2 ukuya kwezi-4 kule minyaka ili-12 idlulileyoI-21.3% isuka ku-5 kuye ku-8 ngexesha elinye ne-12.7% bathi bafunde iincwadi ezingaphezu kwe-13.
Ngokumalunga neentlobo zoncwadi, i Inoveli yembali lolona hlobo lufundwayo ngokubanzi (23,8%), kulandele «inoveli ngokubanzi» (19,5%) kunye nenoveli ye-adventure (8,9%).
Okokugqibela, uphononongo luvavanya nefuthe le-ebook kula maxesha, ivelisa iziphumo apho I-21.7% iqinisekisa ukuba iyayazi incwadi ye-elektroniki ngelixa i-62.2% isithi ayikaze ifunde ngefomathi (Inye kwisine ikwabonisa ukuba abananjongo zokwenza njalo). Ngale ndlela, uphononongo luyakuqinisekisa oko iphepha (78.6%) libetha i-e-ncwadi (11.2%).
Njengomkhenkce, Ama-70% abo kuvavanywayo bayavuma ukuba eSpain abantu abafundanga kangako.
Kwaye ndicinga ukuba asizukuthatha sizathu sabo.
Ngokophando lwamva nje lweCIS, amaqondo okufunda awaphucuki kwilizwe apho I-36% yabantu baseSpain abazifundanga iincwadi, Kwaye siqikelela ukuba phakathi kweencwadi ezimbini eziye zafundwa kule minyaka ili-12 idlulileyo, i-50 Shades yeGrey yenye yazo.
Ezantsi kuthi sinokuxelwa kwangaphambili.
Uzibandakanya kweziphi iipesenti?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » I-36% yabantu baseSpain abazifundanga iincwadi
Ukunikezelwa kwencwadi "Ubabalo bookumkani" nguKen Liu